11 July – Maalinta Caalamiga ah ee Dadyowga dunida | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 11 July – Maalinta Caalamiga ah ee Dadyowga dunida
11 July – Maalinta Caalamiga ah ee Dadyowga dunida
Himilo – Tirada dadka ku dhaqan adduunka ayaa sanadba midka ka danbeeya sii korordheysa, tusaalle sanadkii 1990-kii,- Markii la asteeyay maalinta caalamiga ah ee dadyowga dunida-, waxaa caalamka ku noolaa 5.28 bilyan oo shaqsi toban sanno gudaheed waxaa tirada ku kordhay ku dhawaad hal bilyan oo qof.
Isla toban sanno kaddib, 2011-kii waxey tiradu kor u dhaaftay toddobo bilyan oo ruux, waxaana maanta la qiyaasaa tirada dadka ku nool dunida inay mareyso 7.8-billion, sanadka 2050-kana ay gaari doonto 9.8 bilyan oo shaqsi, sida ay qiyaaseyso Qaramada Midoobay.
2030-ka, India ayaa noqon doonta dalka ugu dadka badan caalamka, iyada oo gali doonta kaalinta koowaad, Shiinaha oo maanta ku jirana ay hoos u dhici doonto tirada dadkiisa, Nigeria ayaa noqon doonta dalka seddaxaad ee ugu dadka badan adduunka, halka tirada dadka ku nool Mareykanka-na ayaa la filayaa inay hoos u dhacdo.
Sida ay dhigayaan tirakoobyada Qaramada Midoobay sanad weliba waxaa dadka ku nool caalamka ku kordha 83 milyan oo ruux, taasi oo ka dhigan in kororku gaarsiisan yahay 1.10 boqolkiiba. Baarayaasha qaarkood ayaase rumeysan in kororku uusan heerkaasi gaari doonin.
Isbeddeladii lagu sameeyay adeegga caafimaad dadweynaha sida in tallaalo loo helay xanuunadii ay dadku u geeriyoon jireen, daryeelka hooyada uurka leh oo la xoojiyay iyo tillaabooyin kale oo la qaaday ayaa loo aaneynayaa kororka ku yimid tirada dadka ku nool dunida.
Marka dhinaca kale laga eego waxaa kororkaasi uu horseeday dhibaatooyin, sida degaankii oo la baabi’inayo si dadku u helaan goobo ay ku noolaadaan, Dhir badan oo la jaray, xayawaanada qaar oo la badar goynayo, cimilada sii xumaaneysa iyo dhibatooyin kale.
Si mushkiladahaasi wax looga qabto ayey Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay fadhi ay yeesheen sanadkii 1990-kii ay qaraar kusoo saareen in 11-ka Luulyo loo asteeeyo maalinta caalamiga ah ee Dadyowga.
Waxaa maalintan la qabtaa isu soo baxyo iyo kulamo lagu iftiiminayo mushkiladaha haysta dadka adduunka, iyada oo lasoo bandhigo xuluushooda, waxaa sidoo kale dib u eegis lagu sameeya waxa ka hirgalay heshiisyadii la gaaray ee la xiriira dhibaatoyinka jira.
Previous: Maqal- Raxiiqul Makhtuum – Casharka 3aad
Next: Dani Ceballos oo diiday inuu meesha ka saaro ku laabashada Premier League